Nkɔmhyɛ a etia Egypt (1-26)
Nebukadnesar bedi Egypt so nkonim (13, 26)
Ɛbɔ a wɔhyɛɛ Israel (27, 28)
46 Yehowa asɛm a ɛbaa odiyifo Yeremia nkyɛn wɔ amanaman no ho ni:+ 2 Egypt+ de ni: Ɛfa Egypt hene Farao Neko+ asraafo ho, Farao Neko a Babilon hene Nebukadnesar* dii no so nkonim wɔ Asubɔnten Eufrate ho wɔ Karkemis wɔ Yuda hene Yehoiakim,+ Yosia ba no ahenni afe a ɛto so anan mu no: 3 “Munsiesie akyɛm nketewa* ne akyɛm akɛse,Na monkɔ ɔko. 4 Mo a motena apɔnkɔ so, momfa nhama nsesa apɔnkɔ no ho na montenatena wɔn so. Munnyinagyina hɔ na monhyehyɛ mo dade kyɛw. Muntwiw mpeaw ho na monhyehyɛ mo akotaade. 5 ‘Adɛn nti na mihu sɛ wɔabɔ hu yi? Wɔresan wɔn akyi, na wɔn mmarima a wonim ko no, wɔayɛ wɔn pasaa. Wɔde hu aguan, wɔn mmarima a wonim ko no antwa wɔn ani. Ehu wɔ baabiara,’ Yehowa asɛm ni. 6 ‘Ahoɔharefo rentumi nguan, na mmarima a wonim ko no rentumi mfi hɔ nkɔ. Wɔahintihintiw ahwehwe ase+Wɔ atifi fam, wɔ Asubɔnten Eufrate ho.’ 7 Hena na ɔreba te sɛ Asubɔnten Nil,Te sɛ nsubɔnten a emu nsu rebu fa so yi? 8 Egypt foro ba te sɛ Asubɔnten Nil,+Ɔba te sɛ nsubɔnten a emu nsu rebu fa so.Na ɔka sɛ, ‘Mɛforo akɔ na mayiri akata asaase no so. Mɛsɛe kurow no ne emufo.’ 9 Apɔnkɔ, momforo nkɔ! Nteaseɛnam, munnye bum! Momma mmarima a wonim ko no nkɔ wɔn anim,Kus ne Put mmarima a wokurakura akyɛm,+Ne Ludim+ mmarima a wokurakura agyan na wokuntun mu* no.+ 10 “Saa da no yɛ Awurade Tumfo, asafo Yehowa da, aweredi da a ɔde betua n’atamfo ka. Na sekan bedi nam amee, na ɛbɛnom wɔn mogya nso amee. Efisɛ Awurade Tumfo, asafo Yehowa bɛbɔ afɔre* wɔ atifi fam asaase no so, Asubɔnten Eufrate+ ho. 11 Foro kɔ Gilead kɔpɛ balsam+ ngo,O Egypt babea, ɔbaabun. Woama wo nnuru adɔɔso kwa,Efisɛ ayaresa biara nni hɔ mma wo.+ 12 Amanaman no ate w’animguase,+Na wo sũ ahyɛ asaase no so ma. Efisɛ ɔsabarima hintiw ɔsabarima,Na wɔn baanu nyinaa bom hwe ase.” 13 Asɛm a Yehowa ka kyerɛɛ odiyifo Yeremia ni. Ɛfa Babilon hene Nebukadnesar* a ɔbɛba abɛsɛe Egypt asaase no+ ho: 14 “Momfa nto gua wɔ Egypt, na mommɔ no dawuru wɔ Migdol.+ Mommɔ no dawuru wɔ Nof* ne Tapanes.+ Monka sɛ, ‘Munnyinagyina hɔ, na monyɛ krado,Efisɛ wɔn a atwa wo ho ahyia nyinaa, sekan bedi wɔn nam. 15 Adɛn nti na wɔapra wo mmarima a wɔn ho yɛ den no kɔ yi? Wɔantumi annyina,Efisɛ Yehowa apia wɔn agu fam. 16 Wɔn mu bebree hintihintiw, na wɔhwehwe ase. Obiara ka kyerɛ ne yɔnko sɛ: “Sɔre! Ma yɛnsan nkɔ yɛn nkurɔfo nkyɛn ne yɛn abusuafo asaase so,Esiane atirimɔden sekan no nti.”’ 17 Ɛhɔ na wɔteɛm sɛ,‘Egypt hene Farao ano yɛ den kwa.Wama akwannya no* atwam.’+ 18 ‘Mete ase yi de,’ Ɔhene a ne din de asafo Yehowa no asɛm ni,‘Ɔbɛba* te sɛ Tabor+ a esi mmepɔw muNe Karmel+ a esi po ho no. 19 Hyehyɛ wo nneɛma a wode betu akɔ obi man so,O ɔbabea a wote Egypt. Efisɛ Nof* bɛdan biribi a ɛyɛ hu;Wɔde ogya bɛhyew,* na obiara rentena hɔ.+ 20 Egypt te sɛ nantwi* a ne ho yɛ fɛ paa,Nanso ahurii* befi atifi fam aba no so. 21 Asraafo a wabɔ wɔn paa a wɔwɔ wɔn mu no mpo te sɛ anantwi mma a wɔadɔ srade;Wɔn nso adan wɔn ho abom aguan. Wɔantumi annyina,+Efisɛ wɔn amanehunu da aba wɔn so,Wɔn akontaabu da no.’ 22 ‘Ne nne te sɛ ɔwɔ a ɔtwe ne ho ase,Efisɛ wɔde mmonnua reba no so ahoɔden so,Te sɛ mmarima a wɔrebu nnua.* 23 Ɔkwan biara nna ne kwae mu, nanso wobebu agu,’ Yehowa asɛm ni. ‘Efisɛ wɔdɔɔso sen ntutummɛ; wɔn dodow nni ano. 24 Egypt babea ani bewu. Wɔde no bɛhyɛ atifi famfo nsa.’+ 25 “Asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka sɛ: ‘Afei mede m’ani rebesi Amon+ a ofi Noh*+ no so, ne Farao so, ne Egypt so, ne n’anyame so,+ ne n’ahemfo so, yiw, mede m’ani besi Farao ne wɔn a wɔde wɔn ho to no so nyinaa so.’+ 26 “‘Na mede wɔn bɛhyɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wokunkum wɔn* no nsa, Babilon hene Nebukadnesar*+ ne ne nkoa nsa. Nanso ɛno akyi no, nnipa bɛsan atena mu bio te sɛ kan no,’ Yehowa asɛm ni.+ 27 ‘Na wo, m’akoa Yakob, nsuro,Na mma wo bo nntu, O Israel.+ Efisɛ megye wo afi akyirikyiri,Na megye w’asefo* afi asaase a wɔakyere wɔn kɔ so no so.+ Na Yakob bɛsan aba, na ne ho bedwo no, na watena hɔ dwoodwoo,Na obiara renhunahuna wɔn.+ 28 Enti m’akoa Yakob, nsuro,’ Yehowa asɛm ni, ‘efisɛ meka wo ho. Aman a mabɔ wo ahwete so no, mɛhyew wɔn nyinaa ase,+Nanso wo de, merenhyew w’ase.+ Mɛteɛ wo so sɛnea ɛfata;+Meremma womfa wo ho nni da.’”
^ Nt., “wotiatia so.”
^ Anaa “bekunkum.”
^ Nt., “bere a wɔahyɛ no.”
^ Kyerɛ sɛ, “Nea obedi Egypt so no.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Ɛbɛdan amamfo.”
^ Anaa “wɔreboaboa nnua ano.”